Shina Flocking Rubber Seal sy mpanamboatra | Tianzheng
Fampandehanana robina 'fitaovana lehibe indrindra dia EPDM, ny antony dia EPDM fingotra tsy amin'ny toetr'andro tsara, UV, fanoherana ny Ozone, fa miaraka amin'ny fanoherana ny hafanana avo sy ambany ihany koa, noho izany ny fitaovana EPDM be mpampiasa amin'ny rafitra famehezana fiara.
Ny famaohana fingotra ao amin'ny rafitra fanamafisam-peo mihidy dia mitana toerana lehibe, ny fantsom-patotra mihombo amin'ny vatan'ny fingotra ankoatry ny tombo-kase fototra ary mampihena ny tabataban'ny rivotra, fa manome torolàlana sy tohana ho an'ny fanandratana fitaratra koa.
Ny firongatry ny kofehy vita amin'ny kodiarana EPDM dia matetika vita amin'ny volon'ondry polyamide na polyester, ary indraindray afangaro amin'ny polyamide sy polyester fibre. Ny halavan'ny villi dia 0,5-0.8mm ary mainty ny ankamaroan'ny villi.
Ny fizotry ny fiompiana dia ahitana pretreatment, gluing, electrostatic and and curing. Aorian'ny fanasitranana, ny dity adhesive dia hanadio ny villi mitsingevana ambony, ary avy eo dia hokapaina amin'ny habe manokana, apetraka ao anaty boaty famonosana, ary zahao raha tehirizina, alefa na fonosana hafa.
hamafin'ny 65 amoron-dranomasina A ka hatramin'ny 80 amoron-tsiraka A.
hakitroky 1.35g / cm3
Faharetana amin'ny sintona > = 7Mpa
Fonosana tapaho ny halavany manokana na arak'izay takinao
Fitaovana sy fanamboarana avo lenta.
Drafitra maromaro azo isafidianana.
Manakana ny vovoka sy ny toetrandro.
Fametrahana sy fikojakojana mora.
Azo ovaina izy mba hifanaraka amin'ny fampiharana anao.
Amin'ny fiara, robina marobe no ampiasaina amin'ny varavarana, varavarankely amin'ny tafo-masoandro. Eto dia manao asa roa izy ireo: famehezana ny vatana sy ny fanamorana ny fanokafana sy ny fikatonan'ny asany miaraka amin'ny hery ambany. Ny tombony ara-teknika amin'ny firotsahana dia azo hazavaina amin'ny alàlan'ny ohatra amin'ny varavarankely misy eo am-pita. Ny fivezivezan'ny vata fitaratra eo ambonin'ny mombamomba ny rubber dia mitaky fampiharana ny herin'ny hery avo lenta. Mifanaraka amin'ny lalànan'ny fitsikilovana, ny hery fikorontanana refesina eto dia faritana ho toy ny coefficient an'ny friction. Raha ny vera / fingotra dia mihoatra ny 1. Ny fikolokoloana ny fingotra dia mety hampihena ny coefficient an'ny friction ho 0.25-0.3
Ny firohotan'ny mombamomba vita volo amin'ny fomba mitohy no fomba tena mandanjalanja indrindra. Aorian'ny fihoaram-pefy, ny votoatiny dia namboarina tamin'ny fantsona UHF sy fantsom-pahavaratra. Avy eo apetaka amin'ny aty ambonin'ilay adhesive rehefa nilatsaka hatramin'ny 110`C izy ary roughened. Manaraka izany ny firohotan'ny olona ary avy eo manasitrana ny adhesive amin'ny 170'C mandritra ny 2-3 minitra.
Teo aloha: Tabilao Fiarovana amin'ny sisin'ny sisin-tany
Manaraka: Sombom-bary vita amin'ny satroka vita amin'ny fantsom-paty